Maqaalkani waxa uu halkan ku barayaa jidka ugu dhakhsaha badan uguna fudud in ay kaa caawiyaan in aad noola files wmv. Oo dadkii oo dhammu aad u baahan tahay oo keliya casho fudud oo weli Cropper wmv awood badan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . By isticmaalkiisa, waxaad si fudud oo dhaqso noola karaa meel kasta oo shaashadda fiidiyow wmv ah, si aad u awooddo takhaluso baararka madow aad video agagaarka, ama ay diiradda saaraan goobaha qaar ka mid ah, ama loo yareeyo video wmv xajmiga iwm Riix si aad u hesho talooyin tafatirka badan oo ku saabsan dalagga AVI , MP4 , MKV , XVID halkan gudbiyo.
Hawlgalka ayaa sidaas tahay maydhan biyaha fudud. Waxaad kaliya jiidi laydi tuuri in ay doortaan meesha aad degan tahay screen doonayo of video wmv iyo u arkaan saameynta-waqtiga dhabta ah dhanka midig ka. Marka waa ok, guji "OK" oo u badbaadin doonaa ka dibna u dhoofin. Waa intaas. Oo waxay hoos ku qoran waa hage ku faahfaahsan waxaad kala socon kartaa.
1 Import wmv videos in Cropper wmv this
Double guji this app ee miiska icon si uu u bilaabi dibna dooran "16: 9 Widescreen" ama "4: 3 Standard" doorasho galo interface tafatir ah. Next, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan aad files wmv deegaanka si ay Cropper wmv this. Si aad u samayn, riix "Import" ikhtiyaarka in dhinaca kore ee bidix ee interface ama jiita iyo hoos u files bartilmaameed ka your computer si ay album this app ee. Ka dib markii in, ay sii wadaan in ay jiidi mid ka mid ah wmv videos aad ka app ee album in ay Timeline ah, muujisay sida soo socota.
2 Dalag files wmv
Waxaa jira laba siyaabood oo kala duwan si ay noola files wmv. Mid ka mid ah waa in midig u guji file wmv on Timeline ka ka dibna dooro "Dalag" doorasho ka submenu ah, ka kalena waa in ay laba jibaaraan guji file ka dibna ku dhuftay "Dalag" ikhtiyaarka hoose ee guddiga video tafatir ah. Labada idin keeni karaa interface ka Dalagyada, halkaas oo aad si fudud oo dhaqso samayn kartaa shaqo abuurka ah.
Marka hore, halkan riix "Play" button, oo markaasi ka furmo suuqa bidix, waxa aad dareemi kartaa si xor ah u jiidi hal dhinac kasta oo afargees tuuri wayna dhaqaaqi in ay doortaan meesha aad degan tahay screen doonayo video. Isla markiiba, waxaad ku eegaan karo saamaynta on suuqa kala saxda ah. Marka waxaad ku dhammaysaa, riix "OK" oo u badbaadin doonaa.
3 dhoofinta file cusub wmv
Ugu tallaabo la soo dhaafay, waxa aad xulan kartaa wmv sida qaab saarka in this app ee qaab saarka suuqa kala garaacida badhanka "Abuur" ka. Oo weliba tallaabo faahfaahsan waa in ay tagaan "qaab"> "Wmv" ka dibna mar kale ku dhuftey ah "Abuur" button in aynu app this wax intiisa kale. Sidoo kale, waxaad sameyn kartaa qaar ka mid ah koobin video sida heerka jir, xallinta, xoogaa heerka iwm garaacida ah "goobaha Advanced" doorasho. Si aad u hesho file cusub wmv, kaliya furo folder wax soo saarka sida Jidka wax soo saarka aad u dhigay.
> Resource > Video > Sida loo Dallaga wmv Files